QM iyo DF oo beeniyey laba warqad oo xasaasi ah oo la faafiyey (Arag) - Caasimada Online
Home Warar QM iyo DF oo beeniyey laba warqad oo xasaasi ah oo la...
QM iyo DF oo beeniyey laba warqad oo xasaasi ah oo la faafiyey (Arag)
Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska QM u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee (UNSOM) iyo Wasaaradda dowladda Federaalka, ayaa ka hadlay Warqado xasaasi ah, oo lagu baahiyay baraha Internet-ka, gaar ahaan “Social Media.” Kuwaasi oo loo tiriyey dowladda Soomaaliya.
UNSOM ayaa Boggeeda Twitter-ka ku sheegtay in Been (FAKE) ay tahay Warqad lagu sheegay in Wakiilka QM, Michael Keating u qoray Madaxweyne Farmaajo, taasi oo quseysay doorashada Somaliland.
.@UNSomalia advises that a letter purportedly from @SRSGKeating to @M_Farmaajo re #Somaliland election on social media is FAKE
— UNSOM (@UNSomalia) October 26, 2017
Warqada ayaa Keating uga jawaabay warqad kaloo la sheegay in Madaxweyne Farmaajo u diray beesha caalamka, taasi oo uga codsaday inay taageeraan Musharaxa Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Cirro.
Keating ayaa qoraalka la been abuuray ugu jawaabay Farmaajo in Beesha caalamka ay ka diiday codsigiisa in Cabdiraxmaan Cirro la teegaaro, maadaama isaga uu yahay shaqsi aaminsan midnimada Soomaaliya.
Warqadan oo soo baxday taariikhdu markay ahayd 3-dii September, ee sanadkan 2017 ayaa sidoo kale lagu sheegay in beesha caalamka ay ixtiraamayso aragtida Madaxweyne Farmaajo ee midnimada Soomaaliya, balse aysan dhinac la safan karin musharaxiinta doorashada Madaxweynaha Somaliland.
Sidoo kale, Wasiirka wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa isna beeniyay warqad kaloo soo baxday Taariikhdu markay ahayd April 1, 2017, taasi oo uu u diray Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qadar.
Yuusuf Garaad ayaa bartiisa Facebook kusoo qoray in warkan uu yahay mid la been abuuray, oo aan waxba ka jirin, isagoo tusaale usoo qaatey in sumada Warqada kore lagu qoray dowladda KMG ee Soomaaliya.
Qoraalkan oo Luuqada Ingiriiska ku qoran, ayaa cinwaan looga dhigay Fursad Siyaasadeed oo ka jirta waqooyiga Soomaaliya, isagoo markaasi ugu baaqay beesha caalamka in la taageero xisbiga Waddani.
Dowladda Soomaaliya waxay ka tarjumaysaa siyaasadda Hal Soomaali, sidaasi darteedna waxaan doonaynaa in la taageero Cabdiraxmaan Cirro iyo Xisbigiisa Waddani, oo horseedi kara in Somaliland kusoo celiyaan midnimada.
Labadan Warqadood oo ay beeniyeen Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo UNSOM ayaa kusoo beegmaya xilli ay mudooyinii dambe soo kordhayeen Warqado laga been abuuray Hay’adaha dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Halkan ka arag warqadda uu beeniyey Keating
Halkan ka arag warqadda uu beeniyey Yuusuf Garaad